किन भएन मनोज गजुरेलको बिहे? गत बर्षको फागुनमै हुने तय भएको बिहे को सँगै हुँदै थियो? - Thulo khabar
किन भएन मनोज गजुरेलको बिहे? गत बर्षको फागुनमै हुने तय भएको बिहे को सँगै हुँदै थियो?
चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले एक अन्तरवार्तामा २०७७ को फागुन भित्रै आफ्नो बिहे हुने बताएका थिए । उनले परिवार पनि राजि भै सकेको र सामान्य तरीकाले बिहे हुने उक्त अन्तरवार्तामा जानकारी दिएका थिए । बिहे हुने युवतीबारे उनले थप जानकारी भने दिएका थिएनन् । तर मनोज गजुरेलको बिहे भएको समाचार अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन ।
हास्य कलाकार मनोज गजुरेल दोस्रो बिहे गर्ने तयारीमा रहेको समाचारले त्यसताका सामाजिक सञ्जाल र मिडिया तातेको थियो । गजुरेलले एक टिभी अन्तरवार्ताका क्रममा सो कुरा खुलाएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनका बारेमा टिकाटिप्पणी भएका थिए । उनले टिभी अन्तरवार्ताका क्रममा गत पुषमा २०७७ भित्रै विवाहको तयारी गरेको बताएका थिए ।
तर उनको विवाहमा अहिलेसम्म भएको छैन । गजुरेलले अर्को अन्तरवार्तामा दुवैतर्फ व्यवहारिक काम मिलाउन बाँकी रहेकाले केही ढिलाई भएको बताएका थिए । उनले विवाहको दिन निश्चित नहुँदा सम्म आफुले को संग विवाह गर्न लागेको हो भन्ने पनि खुलाएका छैनन् ।
केही ब्यवहारीक काम बाँकी भएकाले अहिले नै सबैकुरा नखुलाउँ, उनले भनेका छन्, छिटै नै सबै शुभचिन्तकको चाहना र माग बमोजिम मैले जिवनमा कसैलाई सामेल गराउँदै छु । बिहे गर्ने हो । तर, अब तत्काल आजभोलि नै होइन । केहि व्यवहारिक कुरा मिलाउन बाँकी छ दुवैतर्फ । मान्छे चयन गरिसकेको अवस्था हो, उनले त्यसताका सुनाएका थिए ।
उनले ब्यवहारीक कारणले २०७८ सालभित्र आफ्नो विवाह हुने खुलाएका छन् । गजुरेलले भने अब नयाँ वर्ष कुरौं । २०७८ को कुनै महिना, त्यो पक्का भइसकेको छैन ।
यसअघि मीना ढकालसँग बिहे गरेको २३ वर्षपछि उनी दुईको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो । उनका दुई सन्तान छन् । मनोजले दोस्रो विवाह गर्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि मिनाले आफ्ना छोराछोरी भएको घरमा मनोजले दोस्रो महिला ल्याउन नमिल्ने भन्दै टिप्पणी गरेकी थिइन् ।